Stirista Simba Rayo Nyowani Chitupa Giraidhi neiyo Yechokwadi-Nguva Dhata | Martech Zone
China, July 22, 2021 Muvhuro, July 26, 2021 Douglas Karr
Vatengi vanotenga muchitoro chepamhepo kubva kukomputa yako yekumba, shanyira peji yechigadzirwa pane imwe saiti pahwendefa, shandisa smartphone kutumira nezvazvo pasocial media wobva wabuda ndokunotenga chigadzirwa chakabatana panzvimbo yekutengesa iri padyo.
Yese imwe yezviitiko izvi inobatsira kugadzira yakazara mushandisi chimiro, asi iwo ese akasiyana zvidimbu zveruzivo, zvichiratidza zvakasiyana. Kunze kwekunge zvabatanidzwa, zvinoramba zviri zvakapatsanurwa zvako pamataresi epanyama, maID ID, vatengesi venyika, zvitoro zvepamhepo, mapeji ewebhu ezvinyorwa, nharembozha, malaptop, TV yakabatana, uye zvimwe zviyero zvaunosangana nazvo.
Chibatiso chinoramba chiripo sekero yeemail - chinowanzo dhurirwa kuitira zvakavanzika - kana chishandiso chinokwanisa kubatanidza zvidimbu zvakasiyana zve data, kugadzira girafu rakabatanidzwa iro rinomiririra maonero akazara eimba kana munhu anoita kuti vatengesi vakwanise kunongedza kwavo mushandirapamwe. vateereri.
Kunze kwekuunganidza uye kubatanidza iyo yese data, chinetso chikuru kune inobatsira girafu graph kuri kuichengeta iripo. Nevashandisi vachipindirana nguva dzose mukati mezuva, zviri nyore kuti data rikurumidze kuve rechinyakare uye risiri iro.
Asi ikozvino data-inotyairwa kushambadzira masevhisi mupi Stirista akawedzera ante, neyekutanga chaiyo-nguva yekuzivikanwa girafu pamusika.
Kunyange magirafu mazhinji ekuzivikanwa achigadziridzwa mazuva ese makumi matatu kana makumi mapfumbamwe, iyo OMNA Chitupa Girafu - chakashama tichitarisa naStirista muna Kubvumbi - inogadziridza sekondi yega yega.
Iyo chaiyo-nguva yekuzorodza yeiyo mushandisi kuzivikanwa dhata haisisiri yemhando yepamusoro, asi chinodiwa. Kukosha kwemushandisi ibasa rakanangana nekurongeka kwedatha, uye chinhu chakakosha pakururamisa kuri kutsva kwedata.
Isu tinoramba tichinzwa kubva kuvashambadzi vakashungurudzika avo vakavimbiswa kuwana kune chaiyo-nguva vatengi ruzivo rwekuziva chete kuti zvizhinji zvezvavanoshandisa kuita nevatengi uye tarisiro ndezvekare, zvisiri izvo data. Stirista inounza kumusika OMNA, yekutanga chaiyo-nguva yekuzivikanwa girafu, iyo inovandudzwa kune yechipiri uye inopa makambani iwo ruzivo rwavanoda kuti vanzwisise zvirinani dzimba dzavanotarisira - kwavanoshanda, mashandisiro avanoshandisa mari yavo, zvavanoshandisa, uye nzvimbo dzavanoshanyira nenzira yakavanzika-inoteerera nzira.
Ajay Gupta, CEO weStirista
Kutanga, mushandisi dhata inochinja nekukurumidza. Kero yemugwagwa, muridzi wemidziyo, data rekutenga kana rumwe ruzivo runobatsira kutsanangura munhu kana imba munzira dzekuteerera dzakavanzika. Chimbofungidzira kangani pazuva iwe paunoita sarudzo nyowani nezvekutarisa zvemukati, kutarisa chirongwa, kutenga chimwe chinhu, kana kushanyira kumwe kunhu-chaiko.
Chechipiri, nharaunda chaiyo yekusvika kuvanhu kana dzimba dzine mameseji akakodzera iri kuchinjawo nekukurumidza. Kunyanya kukosha, yechitatu-bato cookie iri kupera, uye kugona kunongedza kana kupa kushambadza pane nharembozha kuri kuwedzera kuomarara. Linear TV kushambadzira kuri kudonha, sevatariri vachienda kune zvimwe zvinyorwa zvemukati.
Uye mitemo mitsva uye kuziva nezve kuvanzika kwevashandisi kwakaita kuti mvumo yemushandisi uye kusazivikanwa ive yakakosha yepakati pekuunganidzwa kwematare kana manejimendi ekuzivikanwa.
OMNA inogadzira mabhiriyoni ekudyidzana ayo anoita anosvika mazana mashanu ezviratidzo zvemufananidzo wega wega. Kana vashambadziri vachida kudonha pasi peiyo yakazara Identity Girafu, ivo vanokwanisa kuwana iwo anowanikwa mairafu: anopfuura mamirioni makumi mapfumbamwe emisha yeUS muIP Girafu, anopfuura 500 bhiriyoni akabatana michina muDhizaira Girafu, uye dhata pamusoro penzvimbo yenzvimbo uye kufamba kunoramba kuripo yakagadziridzwa muiyo Nzvimbo Girafu.
Iyo Yekutanga Turu
Sekuziva kwakawanda kwevashambadzi, iyo data kubva kune yechitatu-bato makuki yakanga yakanyanyisa kuita zvisirizvo, uye yakakamuranisa vanhu mumadhijitari ekutsvagisa mapatani kana mafoni mapindiro ehukama izvo zvaisanyatso kuratidza yavo yakazara zvido.
Mukupesana, yekutanga uye yechipiri-bato dhata iro rinoumba musimboti mukuzivikanwa magirafu senge Stirista's OMNA inoenderana uye yakanyatsojeka. Sekubatanidzwa kwezvakasiyana data pachako, Girafu dzakadai dzinopa mufananidzo uzere wemunhu kana zvinofarirwa nemhuri uye huwandu hwevanhu.
Saka hazvishamise, saka, kuti girafu yekuzivikanwa yave chishandiso chepakati chevashambadzi munzvimbo ino nyowani.
Iyo inogona kuzivisa kushambadzira kununurwa kune yakapihwa imba ine yakabatana TV (CTV) ecosystem yekuparadzira, tambo, uye pamusoro-iyo-pamusoro (OTT) ekushambadzira masevhisi. Nharaunda dzeCTV hadzina mukana wekukuki uye dzakakomberedzwa nemasvingo magadheni uko zvido zvevaoni zvinogona kugadziriswa kuburikidza nekuumburudzwa kwematanho akasiyana e data rekuzivikanwa mune girafu yekuziva.
Girafu yekuzivikanwa inogona zvakare kutungamira kushambadzira kana imwe meseji kune nhare mbozha yenhengo dzemhuri, kana izvo kushambadza uye zvemukati zvinounzwa kuvashandisi vechokwadi pamawebhu webhusaiti
Nemhando dzakawanda kwazvo dzemidziyo uye mapuratifomu anowanikwa kune vatengi, imwe yenyaya hombe dzakatarisana nevashambadzi iri kuendesa akakodzera mameseji munzira dzekubatana - asi kudzora yavo frequency kuitira kuti vaoni vasazonzwa kubhombwa. Pamusoro pezvo, pane dambudziko rekupa mhedzisiro yeshoko rakapihwa kana mushandirapamwe pakutenga kwekupedzisira, kuitira kuti uongorore kushanda kweakapihwa kushambadzira mari
Nzira yakanakisa yekuita izvozvo ndeyekunzwisisa imba kana munhu pamadhizaini uye mune chairo-pasirese, kuburikidza yakazara uye inowirirana-kusvika-kudheti girafu yekuziva. OMNA inoita kuti mabhenji akwire yavo yekutanga-bato dhata pamusoro pevatengi vavo uye vashanyi mumaawa asingasviki makumi maviri nemana, vachifananidza nekusimudzira maprofiles neONA data kuitira kuti mucherechedzo uzive zvakawanda nezvechaunga chayo.
Sezvo denda rinodzokera, vatengesi vava kutaura nezvenyika nyowani iri kubuda yedata revatengi. Kuzivikanwa magirafu senge MONA zvishandiso zvakakosha pakufamba kwekutarisa uye kupihwa zvinodiwa nevashambadziri uye kukosha uye zvakavanzika zvinodiwa nevatengi, padanho rinoratidzira kumhanya kwehupenyu.
Dzvanya Pano Kune Mamwe Ruzivo nezve OMNA
Tags: ajay guptahunhu dhataTV yakabatanacctvDatahuwandu hwevanhuchitupa girafuzvavanofariraomna chitupaZvakanyanyisatenga datakutenga chinangwastiristamuoni zvido
Maitiro Ekuita Anokwikwidza Kuongorora Yekuziva Yekubatanidza Kuvaka Tarisiro